Kune zvakawanda zvekugovera vanotora kunze uko kuti vasarudze kubva, asi vaaravisi nyore kuwana imwe ine nguva yakareba kupfuura yeRose hosting. Yakatangwa mu2001, uyu mupi wekugovera ari muSt. Louis Missouri Yhdysvalloissa umo inoshandisawo nzvimbo yake yedhesi. Iyo kambani inotaura kuti RoseHosting.com -sivulla yekutanga uye yega webhupu yekuchengetera kambani munyika kuti ipe vashandisi vashandisi veLinux kumashure zvakare mu 2001 (pasi peRose Web Services LLC) uye inokurudzira vatengi vayo kuti chengetedza chokwadi.
Zvakanakira, Rose Hosting isangano for Linux-roga iro rinosangana neVPS rinowanikwa (kunyange zvazvo kambani inopawo zvikamu zvose zvakagoverwa uye zvakatsaurirwa kugadzirirwa zvino).
Uyezve, uyu mupi wekugovera ane hurongwa hwakasimba hwekutarisa-sangano rekukosha kukuru munharaunda yekugovera nzvimbo. Zvimwe zvevashandi varo vanokosha zvinosanganisira Altarum -instituutti, UPF.org, uye Voice IP Solutions.
2 Historia historiaa isännöintiyrityksessä
4 Kutengesa uye SSD-hosting
5 RoseHosting-alennukset uye Dzidza Zvimwe
5.1 RoseHosting alennus erikoistarjous
Saiti Bhobi, tinovonga nekuva nesu nhasi. Sezvo nguva dzose, ngatitange neimwe sumo. Ndapota titiudze zvakawanda pamusoro pako uye basa rako RoseHosting.com.
Ndapedza makore anopfuura 20 mukugadzira -ohjelmisto uye web hosting hallinta.
Ndakagadzira Rose Web Services LLC -yritys mu2001 ei halua, että kukkata kambani yangu itsva ndiyo yekupedzisira inopa vashandi-vane ushamwari, vakatendeseka, vakachengetedzwa zvakakwana kweLuxux VPS kubata mauto. Ndinodada kutaura kuti makore anopfuura gumi gare gare isu tiri kubudirira pabasa redu uye ini ndichiri muridzi uye toimitusjohtaja, sezvandave ndiri kubva kune rimwe zuva.
Historia historiaa isännöintiyrityksessä
Padanho-mainos, Rose-palvelun ylläpitäjä Missouri-yakavakirwa LLC. RoseHosting.com ndiyo yakanyanya mhando uye yakakurumidza kuve mutungamiri muLinux VPS yekubata nzvimbo. Zvimwe zvedu zvimwe zvigadzirwa zvinosanganisira linuxcloudvps.com uye virtual-server.org, kunyange paine vamwe. RoseHosting.com inokwenayo nese midziyo yayo – nämä ari pamusoro petambo – panzvimbo yedu yedhorobha mudhorobha St. Louis, isingasviki ma 50 mamaira kubva kunharaunda teilleYhdysvalloissa.
Kudzoka ku2001, kambani idi chete yaikwanisa kupa mabhizinesi ekutengeserana kwe Linux VPS. Izvozvo zvakachinjwa mumakore ekupedzisira e14, asi kunyange ikozvino, nhoroondo yedu munzvimbo yeVPS haina kufananidzwa … edza kuwana chero mumwe wevadzidzi vedu nematambudziko edu. Ndichitarisa kumashure kune 2001 pandakatanga RoseHosting, vatinhi vedu vangave vasiripo kana ivo vaitengesa chete kugoverwa nekugovera mavhavhari. www.archive.org inzvimbo yakanaka yekutsvaga kugadziriswa kwemupepeti wenhoroondo uye nguva refu.
Chii chakafanana nebhizimisi raRoseHosting? Tinogona tässä kuva nemafuta anonyanyisa pane nhamba yemadzimai kambani ikozvino inobata; uye hukuru hwekambani?
Tichitarisa kupfuura boka redu remukati, ini handizivi chaizvo kuti mazita emasipirini edu emaoko edu anogadzirisa sei – sezvo ari oga, kunyange tisingagoni kuwana vazhinji vavo. Izvozvo zvakati, zvichibva pane zvatinonzwa kubva kune vatengi vedu, vamwe vevatengi vedu vanoita mazana emadunhu domains – asi vamwe vasingatongedzi mazita zvachose paVPS yavo. Tinoziva kuti takashumira maService e-300 000 Linux chaiwo kusvika nhasi, kusanganisira vatengi vekare uye vekare.
Sei ndichifanira kuisa nzvimbo dzangu paRoseHosting? Ndinoreva – chii chinoita kuti iwe nani pane vamwe?
Zvakanaka kune, hongu, zvikonzero zvakawanda, asi ini ndichaedza kuichengeta … kuti titange, hatitarisiri-zvachose. Izvo zvinowanzoshandiswa nemabhizimisi, asi izvo zvatinonyatsopikisa. Muteveri wedu ndiye nhamba yedu yekutanga – ndicho chikonzero kuin tisingatarisiri chero chinhu uye tichibhadhara zvikuru mumidziyo yedu uye kutsigirwa kwevatengi.
Yedu 24/7 EPIC Yhdysvaltoihin perustuva tekninen tukikeskus inoshandiswa ne Linux gurus vanoziva hurongwa uye teknolojia kuukauden loppuun asti nekunze. Vatengi vedu vanotitaurira kuti huwandu hweshumiro yatinopa hahuna kumboitika uye kuti, apo pavakatanga nähga sarnga kubata, tyhjä vaine nguva yakaoma vachidavira kuti inogona kuiswa muzvirongwa zvedu kalastusbasa pasina mari yakawedzerwa. Ichokwadi chaizvo-iwe unofanirwa kuzviwana kuti unzwisise kana kuti uchitenda.
Kunze kweizvi, tinopa kusununguka kusununguka kubva kune yako yakagadzirirwa uye SSD yekuchengetedza uye gigabit -verkko kuwirirana mukati.
Kutengesa uye SSD-hosting
Bhobi, ndinoda kutaura zvishoma pamusoro pekutarisira mutemo. Pamwe ini handifungi kutarisa kuipa kwakaipa; iyo inokonzera vatengi vakawanda vasina mufaro munguva refu. Olen unofungei Mune Izvi?
RoseHosting VPS Hinta (heinäkuu 2014)
RoseHosting-alennukset uye Dzidza Zvimwe
Zvakanaka ndizvo zvese zvebvunzurudzo yangu. Kana uchida kudzidza zvakawanda nezvaRose – Heino yangu wongororo kuongorora. Zvimwe, unogona kushanyira RoseHosting online pa http://www.rosehosting.com kana kutevera web-isäntäruutu Twitter uye Facebook.
RoseHosting alennus erikoistarjous
Ndanga ndiri kutevera RoseHoita käyttöaikaa kubva munaNoulukuu 2013 kushandisa Uptime Robot. Kuputira, hei maviri mapikicha emazuva ano zvandine. Y
RoseHosting viimeisen 30 päivän käyttöaika (elokuu 2014)
Rose Kubata -aikapiste (maaliskuu – huhtikuu 2014): 99,97%